မန္တလေးမှာ လွတ်ငြိမ်းဖြင့်လွတ်လာသူက လူငယ်နှစ်ဦးစီးလာသည့်ဆိုင်ကယ်အား တုတ်ဖြင့်ရိုက်ကာလုယက် | 9han News
Welcome to the Gutenberg...
မန္တလေးမှာ လွတ်ငြိမ်းဖြင့်လွတ်လာသူက လူငယ်နှစ်ဦးစီးလာသည့်ဆိုင်ကယ်အား တုတ်ဖြင့်ရိုက်ကာလုယက်
Admin | April 23, 2020 | Local News |2Comments
မန္တလေးမှာလည်း လွတ်ငြိမ်းကကောင်တွေတဲ့ ❌❌
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား အချိန်တိုအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
(၁၉-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့ ည(၀၉၅၀PM)အချိန်ခန့် တွင်တရားလို ကိုနိုင်နိုင်ဝင်းသည် ၂၆လမ်း ကျုံးဘေး ကျုံးတောင်ဘက်အခြမ်းတွင် အနောက်မှအရှေ့သို့တစ်ဦးတည်းမောင်းနှင်လာစဉ် ၂၆လမ်း၊၇၀၊၇၁လမ်းကြား အရောက် အမည်မသိလူငယ်နှစ်ဦးစီးလာသည့်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမှအနားထိကပ်လိုက်လာပီး တုတ်ဖြင့်ရိုက်ကာ တရားလိုပိုင် I phone 6+ရွှေရောင်ဖုန်း၊ပိုက်ဆံ(၅၀၀၀၀)ကျပ်ခန့်ပါပိုက်ဆံအိတ်နှင့်၆၈ယ/၅၄၅၆၈ အနက်ရောင် honda scoopyiဆိုင်ကယ်တို့အားလုယက်ယူဆောင်သွားသဖြင့် အဆိုပါလုယက်သူများအား အမြန်ဖမ်းဆီးပေးရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး ကွပ်ကဲမှုဗဟိုဌာန(police command centre.PCC)မှ သတင်းချပြညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။
Myanmar COVID-19 Map Application ရယူရန္
ချပြသတင်းအရ တိုင်းမှုကူမှရဲအုပ်ဝင်းကျော်ဦးနှင့်အဖွဲ့၊ ပြည်ကြီးတံခွန်ရဲစခန်းနယ်ထိန်းခေါင်းဆောင်လရဲအုပ်ဇော်မိုးသန့်နှင့်အဖွဲ့၊ စက်မှုနယ်မြေရဲစခန်းနယ်ထိန်းခေါင်းဆောက်ဒုရဲအုပ်ချမ်းမြေ့ဇော်နှင့်အဖွဲ့၊မြစ်ငယ်နယ်မြေရဲစခန်းနယ်ထိန်းခေါင်းဆောင်ဒုရဲအုပ်လှကြိုင်နှင့်အဖွဲ့၊အမရပူရမြို့မရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒုရဲအုပ်သက်ပိုင်စိုးနှင့်အဖွဲ့တို့မှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများပုန်းရှောက်နိုင်သည့်နေရာများသို့ ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်းကာ ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၏ တာဝန်သိစွာ ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးမှုကြောင့် အခင်းဖြစ်ပွားပြီးအချိန်တို အတွင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ(၂)ဦးနှင့် ပါဆုံးဖုန်း(Iphone6+)နှင့် ပါဆုံးငွေ(၄၅၀၀၀)ကျပ် တို့အား ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါသည်။
ကူညီကြသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်ညီနောင်တို့နှင့် ကူညီခဲ့ကြသည့် ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ရွာသားအားလုံးတို့အားရဲတပ်ဖွဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးဥပကာရအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ရိုသေစွာတင်ပြအပ်ပါသည်။
တရားခံ(၂)ဦးမှာအောင်နိုင်ဖြိုးနှင့် အောင်ဖြိုးဦး(ခ)ကုလား(ခ)ကတုံးတို့ဖြစ်ပြီး အောင်နိုင်ဖြိုးမှာ (၁၇-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဖြင့်လွတ်လာသူဖြစ်ပါသည်။မူးစိတ်ပုဒ်မ-၁၆(ဂ)ပါ။ အောင်နိုင်ဖြိုးရဲ့ ပုံမှန်လွတ်ရက်မှာ (၃၀-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှဖြစ်ပါတယ်။
ကုလား(ခ)ကတုံး(ခ)အောင်ဖြိုးဦးမှာလည်း ရဲအက်(၃၆)ဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ကျကာ (၁၇-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှာပင်ထောင်မှလွတ်လာသူများဖြစ်ကြပါသည်။
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့မှာ လွတ်ငြိမ်းဖြင့်လွတ်လာသူများ ဖြစ်ပါသဖြင့် မျက်နှာများမဖုံးအုပ်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။
READ ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ် Q ဝင်မယ်ဆိုတာတောင် အဝင်မခံဘဲ ထောင် (၃) လ ချခံလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်
The family of Thiri Thura U Sai Myo Win, who will donate over 11 Billion kyats worth of hospital supplies needed for the coronavirus.
” He does not accept himself asadisease. … his relatives are on the way. “
Travelling history လိမ်တယ် contact history လိမ်တဲ့ Case 16
ကမ္ဘာက ကိုဗစ်အရေး အာရုံစိုက်နေချိန်၊ အဏုမြူဗုံးတွေ လျှို့ဝှက်စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့တရုတ်
ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ် Q ဝင်မယ်ဆိုတာတောင် အဝင်မခံဘဲ ထောင် (၃) လ ချခံလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်
ချဉ််စော်ခါးသီးမှ ပေးသော ကျန််းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
မိသားစုထဲမှာ “အလတ်” ဖြစ်သူတွေသာ သိနိုင်မဲ့ဆိုးရွားတဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်များ
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသဲ”ကျော်ထက်ဇော်.” ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ
ငယ်ရုပ်မပျောက် နုနုပျိုလှပနေဆဲဖြစ်တဲ့” ပပဝင်းခင် “ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ